Ahụmahụ Semalt: Gịnị bụ Darodar?
Tupu ị gụọ isiokwu a, lelee ọnụọgụ weebụ gị na nchịkọta Google. Lee anya na ndi na-ekwu okwu di elu wee hu ma o buru na i nwere ike ibanye n'ime 'Darodar.com' '. Ọ bụrụ na ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịjụ onwe gị, "Gịnị bụ Darodar?"
Gịnị bụ Darodar?
Ebe nrụọrụ weebụ Darodar na-egosi na ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ SEO. Artem Abgarian, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ahịa, kwuru na ọ bụghị kpọmkwem na Darodar. Ndị nchọpụta maara na Darodar na-eji spiders emepụta okporo ụzọ, na-eleghara ihe mgbaru ọsọ robots - g mail correo google.txt, ọ naghị enyekwa uru ọbụla.
Darodar adabere onwe ya ebe ọ dị ugbu a site na iji bọtịnụ ndepụta ndị a iji dọta uche. Ha na-ejide n'aka na ha na-egwu ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dịka o kwere mee, ma na-ahapụ ụzọ nchịkọta akụkọ maka okporo ụzọ ndị na-achọ ịchọta. Mmasị ịmara ebe ndị ahịa si abịa, ndị admins na-aga na ebe Darodar ebe ha na-ahụ ihe atụmatụ SEO na onyinye iji nyebanye ha na ha. Ọ dịghị onye maara ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ziri ezi ma ọ bụ. Eziokwu ahụ bụ na ọ na-eji ike dị egwu na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị ebe ọ na-enweghị ịtụle iwu ndị dị na robots.txt na-eweta ọtụtụ nchegbu. Otú ọ dị, ha na-azọrọ na ha nwere ike ịghọgbu onye ọ bụla nke na-achọ iwepu ha na ndepụta. A ghaghị ikwenye eziokwu nke nkwupụta a.
Ntughachi nke Index Darodar gị n'Ịntanet
1. Nchịkọta data nchịkọta
Otu n'ime ihe ndị Darodar pụtara na ileta saịtị bụ na ọ na-emekarị ka edere ya n'akwụkwọ ndekọ okporo ụzọ. Nsogbu a na nke a bụ na ọ na-ewepu akara ngosi ntinye ederede nke ndepụta na ọ gaghị adị mfe kọwaara otu onyeisi ọrụ ihe kpatara Darodar na-egosi na akụkọ nchịkọta.
Darodar na-emetụta ọnụọgụ ego nke saịtị ahụ. Ebe ọ bụ na bọọlụ Darodar na-aga n'otu saịtị n'otu oge, omume ha na-akwụ ụgwọ ọnụ ụba na ọnụ ọgụgụ dị elu.
Nchịkọta data na ngwa ntanetị nwere ike inyere nyochapụ na-achọghị ọrụ. Ị nwere ike nyocha si Darodar si nchịkọta Google. Site na itinye nyo, Darodar agaghịzi apụta na akụkọ gị. Gaa na Nchịkọta wee họrọ ngwá ọrụ nchara nke ịchọrọ iji n'okpuru echiche / profaịlụ.
2. Ọnụ ahịa bandwit
Mgbe Darodar crawler na-arịọ maka saịtị ahụ, data na-agbagha ma na-esi na sava. Ọ nwere ike ịba ụba karịsịa ma ọ bụrụ na ihe nkesa na-agba ọsọ na bandwit. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke okporo ụzọ ha Darodar nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa.
Ụzọ kachasị mma igbochi Darodar bụ iji robots.txt nke ọ na-eleghara anya. Ọzọkwa, ọ na-esi ike igbochi ngalaba ahụ site na iji ntụziaka htaccess ma ọ bụ ụzọ dị otú ahụ ebe ọ na-eji ọtụtụ ebe iji nyefee okporo ụzọ. Nhọrọ nke ọzọ bụ imejuputa ngọngọ na larịị nkesa nke nwere ike inwe mmetụta dị oke mkpa na arụmọrụ nkesa ma ya mere ọ dịghị atụ aro ya.
Ebee ka ị na-esi ebe a?
Ọ bụrụ na Darodar apụtaghị na ndekọ okporo ụzọ, na-eleghara ha anya ugbu a. Ọ bụrụ na ịchọta ịgba chaa chaa ma ọ bụ naanị ịchọrọ iwepu ha site na akụkọ gị, jụọ ka a kwadoro gị site na ntinye aha. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, tinyezie ụfọdụ ụkpụrụ ntanetị nke na-ekweta na ịnweta ọrụ site na Darodar.com.